I-BlackBerry Key2 LE ngoku isemthethweni ngekhibhodi yayo ebonakalayo yeQWERTY | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-BlackBerry Key2 LE ngoku isemthethweni ukubonisa ukuba umntu unokwahlulwa ngezinto ezinjengebhodi yezitshixo yeQWERTY. Ifowuni ebesele siyazi malunga nezinto ezithile kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaye esele iyinyani ukuntywila kwimakethi enzima ye-Android.
I-BlackBerry Key2 LE ibonakaliswa ube luhlobo olungabizi kakhulu lweSitshixo2 kwaye loo nto ibeka isandi kwi-chip yayo yeQualcomm Snapdragon 636, i-4GB ye-RAM kunye nebhetri efikelela kwi-3.000 mAh. Iselfowuni yokushiya iGboard kunye neSwiftKey ecaleni.
I-BlackBerry Key2 LE sisiphelo esinefayile ye-kwiscreen esingu-4,5 intshi Isisombululo se-1620 × 1080 IPS ye-LCD, kwaye inesibilini sayo i-chip ye-Qualcomm Snapdragon 636 ekhankanywe ngasentla, malunga ne-4GB ye-RAM kunye ne-32 okanye i-64GB yokugcina (kuxhomekeke kwimodeli esiyithengayo). Ikwabonelela ngenkxaso ye-MicroSD.
Enye yezona zinto zibalulekileyo kwaye zahlulahlula kuyo Isitshixo sama-35 seQWERTY ikhibhodi ebonakalayo i-backlit kunye ne-sensor zeminwe kwibar yendawo. Ezi zinto zimbini zahlulahlula i-BlackBerry Key2 LE kulo lonke ukhuphiswano, ke ithiwe thaca njengesiphelo esikhethekileyo.
Kwicandelo elichukumisa iikhamera, inefayile ye- mbini ngasemva kwe13MP + 5MP kunye nomphambili ohlala kwii-megapixels eziyi-8. Kwisoftware ifikelela kwi-Android 8.1 Oreo kwaye kwindawo ekuhlalwa kuyo ibhetri ine-3.000 mAh. Ngaphezulu kwenele kwiselfowuni engagqithiyo kwii-intshi ezi-4,5 kwiscreen, esiya kuba kukukhubazeka kubantu abaninzi abafuna ukonwabela umxholo wemultimedia kwiscreen esikhulu.
Isitshixo seBlackBerry LE idibanisa isoftware enikezelwe kulawulo lwabucala kunye neBlackBerry Hub. Ikwabonelela ngenkxaso kuGoogle Pay, kwaye kulindelwe ukuba ingahlaziywa kwiPie ye-Android 9.
El I-BlackBerry Key2 LE sele isemthethweni kwaye iza kuza ngexabiso lama-euro angama-399 kwinguqulelo ye-32GB kunye nama-euro angama-429 kwimodeli engama-64GB. Isiphelo esingafaniyo nesinye, kodwa esiswele isikrini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-BlackBerry Key2 LE ilapha ngekhibhodi ebonakalayo yeQWERTY ukuziqhela kukhuphiswano